Faah-faahin:-Qaraxyo iyo Dagaal Xoogan oo Ka Dhacay Gobolka Shabeelaha Hoose – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Faah-faahin:-Qaraxyo iyo Dagaal Xoogan oo Ka Dhacay Gobolka Shabeelaha Hoose
Faah faahino dheeri ah ayaa kasoo baxaya weeraro lagu qaaday fariisimo ciidamada Amisom ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin katirsan gobalka shabeellaha hoose.
Weerarka 1-aad ayaa lagu qaaday saldhig askarta Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Golweyn ee duleedka degmada buulamareer, halkaasi oo dadka deegaanka ay sheegeen inuu ka dhacay dagaal dhax maray dagaalyahanadii Al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo askartii fariisimahaasi ka howlgalayay.
Warar hoose ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku loolamay.
Weerarka 2-aad ayaa loo adeegsaday qarax miino oo dhulka lagu aasay lala eegtayna ciidamo katirsan dowladda oo fariisin ku lahaa degmada qoryoole ee gobalka shabeellaha hoose.
Dadka deegaanka ayaa simba u sheegay inuu jiro qarax xoogan oo laga maqlay gudaha degmada qoryooley, wararka qaarna ay sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamadii lagu weeraray.
Dagaalyahano katirsan Al-shabaab ayaa la sheegay iney weerarka 3-aad ku qadeen saldhig ciidamada Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Ambareeso ee gobalka shabeellaha hoose, inkastoo aysan jirin sida Gobjoogayaal ay Radio Simba u sheegeen khasaare ka dhashay weerarkaasi deegaanka lagu soo qaaday.
Sarakiisha ciidamada dowladda ee gobalka shabeellaha hoose oo xiriiro ay la sameysay Simba ayaa inoo xaqiijiyay iney jiraan weeraradaasi.waxeyna Sarakiisha ka gaabsadeen iney inooga warbixiyaan waxa dhacay iyo khasaaraha soo kala gaaray dhinacyadii ku hardamay deegaanada weerarka uu ka dhacay.
War kasoo baxay Al-shabaab ayaa lagu sheegtay mas’uuliyada weeraradaasi, inkasto aysan sheegin warbaahinta ku hadasha Afka Al-shabaab khasaare rasmi ah oo soo gaaray Ciidamadii la weeraray.
Ciidamada Amisom ee saldhiga ku leh deegaanka Ambareeso ayaa lagu soo waramaya iney wadaan dhaq dhaqaaq xoogan, dadka deegaanka ayaa inoo sheegay iney arkayaan ciidamo wata gadiidka dagaalka oo dhooban hareeraha deegaanka Ambareeso ee gobalka shabeellaha hoose, balse aysan cadeyn Karin ujeedkooda ku aadan dhaq dhaqaaqa Military ay sameynayaan.
Weeraradan ayaa kusoo beegmaya xili maalintii shalay aheyd war kasoo baxay dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay iney weerar ka dhacay gobalka shabeellaha hoose, oo ay qadeen ciidamada Danab oo ay wehlinayeen Ciidamo gaarka Mareykanka, ay ku dileen askar iyo sarakiil katirsanaa Al-shabaab ee uu ku jiray wiil uu dhalay hogaanka guud ee Al-shabaab, oo lagu magacaabi jiray Axmed diiriye Abuu Cubeyda .